Ndeupi musiyano uripo pakati pemarble echisikirwo uye marble ekugadzira?
Sezvo isu tese tichiziva, marble yakanaka yegiredhi chigadzirwa.Saka mhuri zhinji dzinoshandisa machena mune yavo yekushongedza, uye marble ine chaiwo marble uye faux marble. Uye kunyangwe iri marble ekugadzira kana marble echisikigo ine zvayakanakira nezvayakaipira.
Chakagadzirwa machena ndiko kushandisa macadam chaiwo marble kana girenayiti kunge achizadza zvinhu, pamwe simende, gesso uye unsaturated polyester nebwe kuti kunamatira, uye inoumbwa neanomutsa, kukuya nekupora.
Iyo yemarble marble ndiyo metamorphic dombo rakaumbwa nekuita kwekukwirisa tembiricha uye yakanyanya kumanikidza mune iyo crust.Inonyanya kuitirwa necalcite, limestone, serpentine uye dolomite.
Zvakanakira uye zvakaipira marble echisikigo uye ekugadzira marble.
Iko kunakirwa kwemarble echinyakare ndeyekushongedza maitiro echisikigo, kunzwa kwakanaka mushure mekupora uye kuomarara kwakasimba. Unoda kupfeka-kuramba zvakanyanya kupfuura scagliola, kwete kutya colouring. Kukanganisika kwemasikirwo emarble ndeokuti haigone kuve isina musono uye tsanga panzvimbo yekukanda haigone kunyatsoenderana. Natural marble inopwanya uye yakaoma kugadzirisa.
Kubatsira kwemarble ekugadzira kwakasiyana mavara. Kubatana kwemarble hakusi pachena saka kune huchokwadi hwakasimba.Iyo inochinjika kupfuura yemarble.Artificial marble makemikari synthesis zvinhu, kuomarara kwayo kudiki, nyore kukwenya uye kusvibisa .